Maamulka Soomaaliyeed ee Juba-land oo yeelatay 2 madaxweyne. – Xeernews24
Maamulka Soomaaliyeed ee Juba-land oo yeelatay 2 madaxweyne.
1.Axmed Madoobe oo loo doortay Madaxweynaha Jubbaland ee afarta sano ee soo socota.
Xildhibaanada Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa u doortay Axmed Madoobe Madaxweynaha Jubbaland ee afarta sanno ee soo socota, kaddib doorasho goor dhow ka dhacday Kismaayo.
2.Baarlamaanka Is bedel doonka ee Jubbaland oo C/rashiid Xidig u doortay Madaxweyne.
Baarlamaanka ay soo dhiseen Golaha la baxay Is bedel doonka Jubbaland ayaa C/rashiid Maxamed Xidig ku doortay guri ku yaalla magaalada Kismaayo, iyadoo doorashadan ay tahay tii la filayay ee ay iclaamiyeen inay qabanayaan Musharaxiinta mucaaradka.
Doorashada ayaa ka dhigan in Jubbaland ay yeelatay Labo madaxweyne, iyadoo dhinaca kale ee doorashada Madaxweynaha ee uu ku tartamayo Axmed Madoobe ay socoto, lana filayo in iyana lagu dhawaaqo.
Hase ahaatee waxaa cajiib aheyd in doorashada ay qabsanayeen Baarlamaanka is bedel doonka Jubbaland in saacad gudahood ku soo gabagabowdo, isla markaana laga hormaro doorashadii kale ee ka socotay.
C/rashiid Maxamed Xidig waa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, isagoo ka mid ahaa Musharaxiintii sida weyn uga soo horjeeday Axmed madoobe ee qaadacay Guddiga doorashada Jubbaland.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/08/jubaland.jpg 371 660 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-22 11:09:012019-08-22 11:09:27Maamulka Soomaaliyeed ee Juba-land oo yeelatay 2 madaxweyne.
Jabuuti oo wali ka quusan la, guul daradi kursiga QM ee la siiyey dowladda ... DEGDEG: Qulqulaayin ka dhacay magaalada Diri-dhaba.